Frozen Elvis, Mac App Store | ငါက Mac ကပါ
အေးခဲ elvis တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါထိခိုက် Flappy Bird ကို၏ကိုယ်ပွား, များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်၏စျေးနှုန်းရှိပါတယ်ရာ 0,99 €နှင့် ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Frozen Elvis သည် Flappy Bird clone ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်အခြေစိုက် Nguyen HàĐông (Dong Nguyen) မှဟနွိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၃ မိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်အခြေစိုက် .GEARS Studios မှထုတ်ဝေသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဂိမ်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က App Store နှင့် Google Play မှတီထွင်သူမှဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်တွင်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဂိမ်းဖန်တီးသောကြီးစွာသောမြင့်မားသောစွဲ.
ဂိမ်းတွင်ကစားသမားသည် Elvis ပုံစံကစားသမားနှင့်ငှက်တစ်ကောင်အားအစိမ်းရောင်ပိုက်တန်းများအကြားမထိဘဲပျံသန်းရန်ကြိုးစားသည်။ Developer သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဂိမ်းကိုဖန်တီးခဲ့သည် သူဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခြားဂိမ်းတစ်ခုအတွက်ဗဟိုဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည့်ငှက်တစ်ကောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ယခုတွင်သင်သည်အခွင့်အရေးရရှိသည် သင်၏ Mac ပေါ်ရှိ Flappy Bird နှင့်ဆင်တူသောဂိမ်းသငျသညျစိန်ခေါ်သောအခါအဘို့။ ၎င်းကိုမူလတီထွင်သူ (Dong Nguyen) ပြောသကဲ့သို့၎င်းသည်အလွန်စွဲလမ်းစေလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ပို့စ်ရဲ့အဆုံးမှာမင်းကို download link ချန်ထားခဲ့တယ်.
အရွယ်: 2.8 ကို MB
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: YAWMOO လီမိတက်© ၂၀၁၅ YAWMOO လီမိတက်
compatibility: OS X 10.10 နှင့်အထက် 64-bit processor
ကုန်ချ 'Frozen Elvis' ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအောက်ပါ link ကနေတိုက်ရိုက် Mac App Store ကနေတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန် Flappy Bird ကိုဂိမ်း။ မင်းကအဲဒါကိုအခမဲ့လို့မင်းထင်တယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Frozen Elvis သည် Mac App Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်
Apple TVOS အတွက်ပထမဆုံး update ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်